XOG-Lafta-gareen oo Ku Biiraya Maamulada Mucaaradka ah iyo Khilaafka Kala Dhexeeya Villa Somalia oo Cirka Galay.
June 11, 2019 puntlandnews Somalia, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu soo xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxda DFS iyo hogaamiyihii ugu dhowaa ee maamul goboleedyada Cabdicasiis Lafta-garen.
Arrintaan ayaa soo ifbaxday kadib markii bilihii ugu dambeyey aysan Koonfur Galbeed helin dhaqaalihii ay ku lahayd DFS, waxayna taasi ay sababtay in Lafta-gareen uu cabasho ka muujiyay xuquuqda Koonfur Galbeed ee ku maqan dowladda Soomaaliya.
Warqad cabasho ah oo ka socota madaxweynaha koonfur Galbeed ayaa waxaa la geeyay xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, taas oo lagu dalbanayo in dowladda Soomaaliya ay wax ka badasho wajiga ay kula dhaqanto maamulkaasi.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay hadda isku maareeyaan dhaqaale ka soo xerooda goobo ku yaala deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo lacagta laga qaado aysan ku filneen socodsiina shaqada maamulka.
Hogaamiyayaasha maamulada dalka ayaa ku cadaadinaya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen in uu ku biiro shirarka ay abaabulayaan iyo mucaaradnimada dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyo in aysan si wanaagsan kula dhaqmin maamulada.
Madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa inaysan soo gaarsiin maamulada dalka boqolaal kun oo dollar taasi oo ay beesha caalamku ku kaalmayso Soomaaliya, waxaana ka dhashay khilaafka ilaa hadda taagan.